Simbi Shot, Simbi Grit, Isimbi Simbi Shot - TAA
Kupa yemhando yepamusoro abrasives
Chigadzirwa chinoratidza Yakanyanya kusimbisa, kukwirira kwakasimba, hupenyu hurefu hwebasa. Kuputsa kwakaderera, guruva rakadzika, kusvibiswa kwakadzika. Kuderera kupfeka kwemidziyo, hupenyu hwakareba hwechishongedzo. Deredza dedusting system mutoro, regedza mashandisiro nguva yekurasa zvigadzirwa. Unyanzvi tsananguro Yemakemikari Kurongeka% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S -0.05% P -0.05% Zvimwe zvinhu zvechisimba Kuwedzera Cr Mo Ni B Al Cu nezvimwewo Kuomarara HRC42-48 / 48-54 Microstructure Duplex chimiro co ...
Zvimiro * Inogona kushandiswa kutsiva akasiyana siyana emamineral sands & asiri-esimbi abrasives, senge corundum, silicon carbide, arenaceous quartz, girazi marozari, nezvimwewo. * Inogona kutsiva chikamu cheyekunhonga maitiro. * Yakadzika guruva kuburitsa uye yakanakisa yekushandira nharaunda, ichideredza kurapwa kwekunhonga tsvina. * Yakadzika yakazara mutengo, hupenyu hwebasa iri makumi masere kusvika zana ezviuru nguva yeasina-esimbi hasha senge corundum. * Unogona B ...
Stainless simbi yakatemwa waya kupfura inoshandiswa zvakanyanya kupfura / mweya kuputika kwemhando dzakasiyana dzeasina-ferrous simbi castings, simbi dzesimbi zvigadzirwa, aruminiyamu zvikamu, zvishandiso zvematombo, matombo echisikigo, nezvimwewo, kuratidza iyo simbi vara uye kuwana yakatsetseka, isina ngura-isina. , matt fi nishing pamusoro pekurapa eff ect. Iine mhando yakanaka yesimbi isina simbi waya mbishi, simbi isina simbi yakapfurwa inoratidzirwa neyunifomu inoverengeka uye neukukutu, iyo inovimbisa hupenyu hwayo hwakareba hwebasa uye yakanaka nenyunje eff ect. Pe ...
Isu takaita shanduko huru muzvinhu uye nehunyanzvi pahwaro hwetsika yekugadzira maitiro. Tichishandisa yepamusoro chiwanikwa chiwanikwa simbi waya seiyo substrate iyo inokwidziridza zvemakanika zvivakwa uye ita kuti igadzikane. Kuvandudza wiredrawing hunyanzvi hunoita kuti yemukati kurongeka iwedzere. Kuvandudza echinyakare passivation maitiro ayo anovimba zvizere pakukanganisa kudzikisa kukanganisa panguva yekuputika, kusimudzira hupenyu hwebasa. Item technical indekisi Chemi ...
Zvakanakira dhiramu kupfura blast muchina Reliable Blasting Technology: Drum shot blast michina inogadzirwa mune akasiyana akasiyana akasiyana, mhando uye saizi. Iwo macompact uye anongova nekatsika kadiki kwazvo. Kuenderera mberi kubudikidza kunogona kuwanikwa nekubatanidza akati wandei michina. Kugadziriswa-kwehukama Kurongeka: Kugara uchichengetedza kwakakosha kuchengetedza iyo yenguva refu kukosha kweiyo michina. Yakakura sevhisi uye yekuongorora masuo anopa nyore kuwana kune ese akakosha zvikamu. Semagumo...
Maturu edu akaomarara-akaomarara anogadzirwa ne brazing. Mune mamwe mamiriro, dhaimani redhaimani rakasungirirwa kune substrate yesimbi mushure mekunyungudika kwesimbi. Rudzi rwechigadzirwa urwu rune hunhu hwekukuya zvakanyanya, hupenyu hurefu hwebasa, chengetedzo, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusvibiswa-kusununguka. Kunyanya kutsiva yazvino resin chisungo corundum yekucheka uye kupukuta maturusi, ese akakora uye epakati mahombe-akakwenenzverwa akasarudzika madhaimani maturusi, uye mamwe anopisa-chakatsindirwa sintered diam ...
Sponge Midhiya hasha inowanikwa mune anopfuura makumi maviri marudzi, kuzadzisa ma profiles kubva ku0 kusvika 100+ micron. Zvese zvinotsvaga yakaoma, yakadzika guruva, yakaderera rebound blasting. Iyo inonyanya kushandiswa ndeye TAA-S dzakateedzana nealuminium oxide uye TAA-G dzakateedzana nesimbi grit. Type Profiles Abrasive Media Agent Chikumbiro TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium oxide # 16 Inokurumidza uye ine hukasha kune yakaoma maindasitiri ekupfeka. TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium oxide # 30 Kubviswa kwemazhinji multilayer machira uye chimiro kune 75 micron. TAA-S # 30 ± 50 micro ...
Inofananidzwa neyechinyakare simbi grit inogadzirwa nekupwanya simbi kupfura, kutakura simbi grit ine zvinotevera Zvimiro: Raw Chishandiso Kutakura simbi grit inogadzirwa neChromium inotakura simbi iyo ine yakaoma kuomesa kugona nekuda kwayo kwakanyanya zvemukati zveChromium. Technology Kubereka simbi grit inoitwa nekupwanya iyo yakakwenenzverwa inobereka simbi yakananga iyo isina kukanda kuremara. Yakaderera kupfeka Iyo inoumbwa nyika inotakura simbi grit ine yakapinza micheto ine yakakwira michina chivakwa pane yechinyakare cast simbi grit ine ...
ZVIITIKO & ZVOKUDZIDZA ZVINORATIDZA
Simbi ngura iri kwese kwese, nguva dzese Kudzivirira kuita ngura kwesimbi, nzira yakajairika ndeyekushandisa machira kudzivirira pamusoro pezvigadzirwa zvesimbi. Iyo yepamusoro inofanirwa kucheneswa pamberi pekudzivirira kwekuvhara Mazana ezvigadzirwa nemaindasitiri anosanganisira ngarava, matangi ekuchengetera, mabhiriji, simbi str ...
A: Zvinhu zvekucheka disc: Kucheka discs kunogona kugoverwa mumhando mbiri: resin yekucheka disc uye dhayamondi yekucheka disc. Inogona kushandiswa zvakanyanya kucheka kwezvinhu zvakajairika zvesimbi, simbi isina simbi & zvisiri-zvesimbi. Pamusoro pezvo, nekuda kwenzvimbo yekushandisa ...